A4 ကြျော စှာ အိမျ မဌားရသေးခ ငျ အိမျ မှာခဏနခှေငျ့ပွုထား တဲ့ ယုနျလေး – Focus Myanmar
A4 ကြျော စှာ အိမျ မဌားရသေးခ ငျ အိမျ မှာခဏနခှေငျ့ပွုထား တဲ့ ယုနျလေး
A4ကြျော စှာကတော့ ယုနျလေးရဲ့ဖေးမကူညီမှုနဲ့ ပရိသတျအသိမှတျပွုအားပေးမှုရရှိခဲ့သူဖွဈပွီး ငယျရှယျစဉျအခြိနျကတညျးက ဆိုးမိုကျပတေမှေုနဲ့ အသားကခြဲ့ပမေယျ့ လကျရှိမှာတော့ သူယုံကွညျရာဂီတခရီးလမျးကို လြှောကျလှမျးရငျး ဘဝကို အကောငျးဆုံးဖွတျသနျးနိုငျဖို့ ကွိုးစားနပေါတယျ။
ယုနျးေ လးကတော့ လူငယျတှကေို လကျကမျးချေါလေ့ရှိပွီး A4 ကြျောစှာနဲ့ မငျးZ တို့ကိုလညျး သူကိုယျတိုငျရေးစပျထားတဲ့ ဝမျးစား သီခငျြးထဲမှာ ပါဝငျဖနျတီးသီဆိုခှငျ့ပေးခဲ့ပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ စိတျကူး ဆိုတဲ့ သီခငျြးသဈလေးမှာလညျး A4 ကြျောစှာနဲ့ မငျးZ တို့က ပါဝငျကွမှာဖွဈပွီး မငျးZ ကတော့မန်တလေးမွို့ကနေ ရနျကုနျရောကျလာကာ ယုနျလေးရဲ့ အိမျမှာနေ နတောလညျးဖွဈပါတယျ။ ယုနျလေးကတော့ A4 ကြျောစှာ အိမျမဌားရသေးခငျ အိမျမှာခဏနခှေငျ့ပွုထားတဲ့အကွောငျးကို “အားလုံး Good Night par A4 ကြျောစှာ အိမျမဌားခငျ မိုးရှာတော့လညျး သူလမျးဘေးအိပျလို့ အဆငျမပွလေို့ အိမျခဏ ချေါထား ရောကျရောကျခငျြး ကြှနျတျောလညျး မနကျတိုငျး ညတိုငျး ဘုရားရှိခိုးတယျ . ဒီ နှဈယောကျလညျး ရောကျတာနဲ့ ဘုရားရှိခိုး ခိုငျးပွီး . နောကျနေ့တှပေါ မနကျ တဈခါ ညတဈခါ ရတဲ့ဘုရားစာတှေ ဆိုခိုငျးထားတယျ” လို့သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာမှာဖျောပွထားပါတယျ။
ပရိသတျကွီးရေ A4 ကြျောစှာအတှကျ ကိုယျတိုငျအိမျငှားပေးဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့ ယုနျလေးကတော့ လတျတလောမှာ မိုးတှရှောနလေို့ လမျးဘေးအိပျလို့ အဆငျမပွောတာကွောငျ့ အိမျငှားမရသေးခငျ သူ့အိမျမှာပေးနဖေို့ ခဏချေါထားပါတယျတဲ့။ပရိသတျကွီးရေ ယုနျးလေးရဲ့ A4 ကြျောစှာ အပျေါထားတဲ့ စတေနာတှကေတော့ တကယျလေးစားစရာပါပဲနျော။
A4ကျော် စွာကတော့ ယုန်လေးရဲ့ဖေးမကူညီမှုနဲ့ ပရိသတ်အသိမှတ်ပြုအားပေးမှုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီး ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်ကတည်းက ဆိုးမိုက်ပေတေမှုနဲ့ အသားကျခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ သူယုံကြည်ရာဂီတခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းရင်း ဘဝကို အကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
ယုန်းေ လးကတော့ လူငယ်တွေကို လက်ကမ်းခေါ်လေ့ရှိပြီး A4 ကျော်စွာနဲ့ မင်းZ တို့ကိုလည်း သူကိုယ်တိုင်ရေးစပ်ထားတဲ့ ဝမ်းစား သီချင်းထဲမှာ ပါဝင်ဖန်တီးသီဆိုခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ စိတ်ကူး ဆိုတဲ့ သီချင်းသစ်လေးမှာလည်း A4 ကျော်စွာနဲ့ မင်းZ တို့က ပါဝင်ကြမှာဖြစ်ပြီး မင်းZ ကတော့မန္တလေးမြို့ကနေ ရန်ကုန်ရောက်လာကာ ယုန်လေးရဲ့ အိမ်မှာနေ နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယုန်လေးကတော့ A4 ကျော်စွာ အိမ်မဌားရသေးခင် အိမ်မှာခဏနေခွင့်ပြုထားတဲ့အကြောင်းကို “အားလုံး Good Night par A4 ကျော်စွာ အိမ်မဌားခင် မိုးရွာတော့လည်း သူလမ်းဘေးအိပ်လို့ အဆင်မပြေလို့ အိမ်ခဏ ခေါ်ထား ရောက်ရောက်ချင်း ကျွန်တော်လည်း မနက်တိုင်း ညတိုင်း ဘုရားရှိခိုးတယ် . ဒီ နှစ်ယောက်လည်း ရောက်တာနဲ့ ဘုရားရှိခိုး ခိုင်းပြီး . နောက်နေ့တွေပါ မနက် တစ်ခါ ညတစ်ခါ ရတဲ့ဘုရားစာတွေ ဆိုခိုင်းထားတယ်” လို့သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ A4 ကျော်စွာအတွက် ကိုယ်တိုင်အိမ်ငှားပေးဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ယုန်လေးကတော့ လတ်တလောမှာ မိုးတွေရွာနေလို့ လမ်းဘေးအိပ်လို့ အဆင်မပြောတာကြောင့် အိမ်ငှားမရသေးခင် သူ့အိမ်မှာပေးနေဖို့ ခဏခေါ်ထားပါတယ်တဲ့။ပရိသတ်ကြီးရေ ယုန်းလေးရဲ့ A4 ကျော်စွာ အပေါ်ထားတဲ့ စေတနာတွေကတော့ တကယ်လေးစားစရာပါပဲနော်။
သငျ့မှာ လေးဘကျနာရှိနခေဲ့ရငျ လုံးဝရှောငျရမဲ့ အစားအသောကျတှေ
သွယ်လျတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်ရှင် ပြင်သစ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ နေထိုင်နည်း လျှို့ဝှက်ချက်များ